Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဧပြီလ ၂၀၁၅	45
kai says: အိုဘားမားရဲ့မိန့်ခွန်း ဘယ်သူရေးပေးတာလဲ ?
kai says: မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တရုတ်နိုင်ငံ သွားရောက်တောင်းပန်
Alinn Z says: ဦးစိမ်းသိမ် ပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကိုရော….ဘယ်သူရေးပေးတာလဲ…. စိန် ပြောသမျှထဲ…စိန် ခေါ်တာတွေ များနေတယ်…
kai says: Ancient inland human dispersals from Myanmar into interior East Asia since the Late Pleistocene
Published 26 March 2015 Given the existence of plenty of river valleys connecting Southeast and East Asia, it is possible that some inland route(s) might have been adopted by the initial settlers to migrate into the interior of East Asia. Here we analyzed mitochondrial DNA (mtDNA) HVS variants of 845 newly collected individuals from 14 Myanmar populations and 5,907 published individuals from 115 populations from Myanmar and its surroundings. Enrichment of basal lineages with the highest genetic diversity in Myanmar suggests that Myanmar was likely one of the differentiation centers of the early modern humans. Intriguingly, some haplogroups were shared merely between Myanmar and southwestern China, hinting certain genetic connection between both regions. Further analyses revealed that such connection was in fact attributed to both recent gene flow and certain ancient dispersals from Myanmar to southwestern China during 25–10 kya, suggesting that, besides the coastal route, the early modern humans also adopted an inland dispersal route to populate the interior of East Asia.
ဧရာဝတီ| April 3, 2015 | တရုတ်နိုင်ငံတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသော ရှေးဦးလူသားများသည် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ မြစ်ကြောင်းများမှတဆင့် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သုတေသန စာစောင်ဖြစ်သည့် Scientific Reports တွင် မကြာသေးမီက ရေးသားထုတ်ပြန်ထားသော စာတမ်းတစောင်က ဆိုလိုက်သည်။
naywoon ni says: မိ်​န့်​ခွန်း​ရေး​ပေးရတာက အ​တော်​တာဝန်​ကြီးသား ။ သက်​ဆိုင်​ရာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ မူဝါဒ ကိုခြုံငုံမိရတယ်​ ။ မိန့်​ခွန်းမှာပါတဲ့ အချက်​အလက်​​တွေက တိကျရတယ်​ ။ မိန့်​ခွန်း​ရေးသူရဲ့ အာ​ဘော်​ စိတ်​ခံစားချက်​​တွေ မပါ​အောင်​ စကားလုံးက အစ ​ရွေးချယ်​ရတယ်​ ။ မိန့်​ခွန်း​ပြောမဲ့ သူရဲ့ စိတ်​ကိုလည်းသိ​နေပြီး သူအသွင်​ သန်​တန်​ နဲ့ လိုက်​​လျောညီ​တွေရှိ​အောင်​လည်း ​ရေးရတယ်​ ။ မိန့်​ခွန်း​ပြောမဲ့သူရဲ့ စိတ်​ကို ပူးကပ်​နိုင်​သ​လောက်​ ပူးကပ်​နိုင်​ရမယ်​ ။ ဘယ်​​လောက်​ထိ ပူးကပ်​သွားတတ်​သလဲဆို မိန့်​ခွန်း​ရေး​ပေးသူဟာ သူကိုယ်​တိုင်​ မိန့်​ခွန်း​ပြော​တဲ့ သူရဲ့ ဘ၀ အစိတ်​အပိုင်း​လောက်​ဖြစ်​သွားပြီး မိန့်​ခွန်း​ပြောတဲ့သူရဲ့ ​နေထိုင်​မှု စရိုက်​လက္ခဏာ​တွေပါ အသွင်​တူသွားတဲ့ သူတစ်​​ယောက်​​တွေ့ဖူးတယ်​ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12139
Alinn Z says: ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အဲ သတင်းတက်လာပြီး ဘာမှ မကြာဘူး။ ဆဲလိုက်ကြစမ်းဆိုတာ။ အဆဲနဲ့စပြီဆိုရင် ဒီလုပ်ရပ် မှန်ပြီလား မသိဘူး။ အမေစုကို လည်း အားရလာတယ်။ ဒီလိုလေး အပေးအယူနဲ့မှ မိုက်တာ။
ခင်ဇော် says: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804860749586484&set=a.225144747558090.52889.100001876993404&type=1
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: သခင်​မျိုး​ဟေ့ ဒိုဘာမင်​
kai says: Different Length of Ring Finger Can Say A Lot About Your Personality
ခင်ဇော် says: A
kai says: ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး.. အကုန်တူနေကြသလည်း.. အံ့သြမိတယ်..။
ကြည့်ရတာ.. အေကကောင်းနေလို့နဲ့တူဒယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: ကတောက်!!
Alinn Z says: ကျနော်လည်း A ပဲ.. ။
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟိုက်စ်… ကျောက်စ်လည်း A ပဲ…
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဟရို့ … A ဆိုဒ်တွေ များကြပါလားကွယ်ရို့ …
Mike says: A
တောင်ပေါ်သား says: I am … ( A ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ‘A’ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: “C” ဗျို့။ “C” Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: မြန်မာပြည်စီးပွားရေး..အနာဂတ်အတွက်…။
kai says: Invited VIP Guests: Hollywood Actress/Director Michelle Yeoh, U.S. Congressman Dana Rohrabaher, Congressman Brad Sherman, Congressman Alan Lowenthal, Congresswoman Dr. Judy Chu, Congressman Ted Lieu, and CA Assemblymember Ed Chau.
Ma Ma says: သဂျီး ရေ-
kai says: California towns are running out of water as the drought grows…
kai says: မေး။ ။ကိုအောင်ဒင်က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း တယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ ရှိနေတုန်းကလဲ အစိုးရကို အများကြီး ဝေဖန်ခဲ့တယ်။ အခု အစိုးရကို ဘယ်လို အကဲဖြတ်ချင်ပါသလဲ။
kai says: ဟန်ချက်။
kai says: Posted by: Video-editer on April 11, 2015 at 12:33 PM0Comments
kai says: Aung Win
Koe Kant2	By ဒီဗွီဘီ
kai says: လူ့ယဉ်ကျေးမှုအရ.. နှစ်ကူးရက်မှာတော့.. ခဏလောက်အပစ်ရပ်ကြဖို့ကောင်းတယ်..။
လူသားဆန်ကြတယ်ဆိုရင်ဖြင့်.. ၁၀ရက်အပစ်ရပ်ရေး… အထူး(အထူး)အခါတသိန်း.. တိုက်တွန်းပါကြောင်း..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အတ္တ၊ အတ္တ၊ အတ္တ အတ္တ၊ အတ္တ၊ အတ္တ၊ အတ္တ၊ အတ္တ၊ အတ္တ အတ္တ၊ အတ္တ၊ အတ္တ ……………
ခင်ဇော် says: သဘူတောပါတယ်။
kai says: < font color="red" > Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: Myanmar Bans Condoms, Viagra And Birth Control Pills …
kai says: ဒီနှစ်သင်္ကြန်အကြတ်နေ့မှာ မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို့ကလူငယ်တွေဟာ ဆင်တူဝတ်စုံအမျိုးမျိုး ဝတ်ဆင်ပြီး အုပ်စုလိုက် ရေပက်ခံထွက်ကြ တာ တွေ့ရပါတယ်။ ကိုကျော်ဇောဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
kai says: Married locum GP who fondled teenager’s breasts in ‘moment of madness’ when she came to him with chest pains is jailed Dr Unt Tun Maung, 43, working asalocum GP on Teesside at time of attack
Dr Maung came fromamedical family and had worked in the NHS since moving to the UK in 2000, Mr Hurst said, and was held in high regard both professionally and personally. Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3044811/Married-locum-GP-fondled-teenager-s-breasts-moment-madness-came-chest-pains-jailed.html#ixzz3XhdUPzgB
kai says: စာရေးဆရာမရဲ့အမျိုးသားဆိုရင်…. မြန်မာပြည်အတွက်တော့.. သတင်းကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့…။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: သူ​တွေ့သွားပြီကိုး
kai says: ကျုပ်က.. ကျောင်းသားဘ၀မှာထဲက.. မြန်မာပြည်ရဲ့စာအုပ်တိုက်တခုမှာ.. အလုပ်လုပ်ဖူးတယ်လေ.. နော…။
ထားထားလင်းဆိုရင်လည်း.. အဲဒီတိုက်မှာ.. ၀တ္တုတိုလေးတွေရေးခဲ့တာကနေ… စခဲ့တာ..။ Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: Joshua Chit Tun to Run for U.S. Senate
kai says: မြန်မာထဲက.. ယူအက်စ်စိနိတ်… Run သူပေါ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: https://youtu.be/mPKYScY37Xo
kai says: မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၆- ၁၃၇၇ ခုနှစ် မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ အတွက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော နှစ်သစ် ဆုတောင်းစကား
kai says: Obama decries Baltimore riots, speaks with frustration on underlying issues
kai says: Stephen Hawking Predicts Humans Won’t Last Another 1,000 Years On Earth
မြစပဲရိုး says: မေ မှာ အရောင်မရင့်သေးတော့ ဒီမှာဘဲ သတင်းချလိုက်ပြီ။
A Kensington Palace statement said both the Duchess and her newborn daughter are ‘doing well’ after the birth သူ့ အစ်ကို ဂျော့ဂ်ျ မင်းသားလေး က ဝါဆိုလပြည့်။